Nhau - kubatana kwevanhu-robhoti
Rondedzero nyowani yeWorld Robotic 2020 Industrial Robots inoratidza rekodhi yemamirobhoti emamirioni 2.7 anoshanda mumafekitori pasirese - kuwedzera kwe12%. Kutengeswa kwemarobhoti matsva kunoramba kuri padanho repamusoro uye zvikamu mazana matatu nemakumi matatu nematatu zvakatumirwa pasi rose mu2019. Ichi chikamu che12% zvishoma kana ichienzaniswa na2018, asi zvakadaro yechitatu yepamusoro yekutengesa vhoriyamu yakambonyorwa.
Mari yemarobhoti ekumaindasitiri anoshanda mumafekitori pasi rese nhasi anoratidza mwero wepamusoro munhoroondo, ”anodaro Milton Guerry, Mutungamiri weInternational Federation of Robotic. "Inotungamirwa nebudiriro nyaya yehungwaru kugadzirwa uye otomatiki uku kuwedzera kwepasirese kweanosvika 85% mukati memakore mashanu (2014-2019). Kuderera kwazvino kwekutengesa ne12% kunoratidza nguva dzakaoma dzakasangana nemaindasitiri makuru evatengi, emagetsi nemagetsi / emagetsi. ”
"Pamusoro peizvozvo, mhedzisiro kubva kudenda recoronavirus kune hupfumi hwepasi rose haigone kuongororwa zvizere," anoenderera mberi Milton Guerry. "Mwedzi yasara ya2020 ichaumbwa nekuenderana neiyo" nyowani itsva ". Robhoti vatengesi vanogadzirisa kudiwa kwezvishandiso zvitsva uye kugadzirisa mhinduro. Kukurudzira kukuru kubva kumahombekombe makuru hazvigone gore rino. China inogona kunge iri yakasarudzika, nekuti iyo coronavirus yakatanga kuzivikanwa muChinese guta reWuhan muna Zvita 2019 uye nyika yatotanga kupora kwayo mukota yechipiri. Humwe hupfumi hunoshuma kuve panguva yekuchinja izvozvi. Asi zvinotora mwedzi mishoma kudzamara izvi zvashandura kuita michina yekushandisa uye kudiwa kwerobhoti. "2021 ichaona kupora, asi zvinogona kutora kusvika 2022 kana 2023 kusvika padanho redambudziko."
Asia, Europe neAmerica - pfupiso
Asia inoramba iri musika wakasimba kwazvo wemarobhoti emaindasitiri - mashandiro anoita dunhu guru rekutora China akasimuka ne21% uye akasvika angangoita 783,000 mayuniti mu2019. Japan iri pachinhanho chechipiri nemayuniti angangoita zviuru makumi matatu nezvishanu - pamwe ne12%. Anomhanya-mhanya iIndia ine rekodhi nyowani inosvika zviuru mazana maviri nemazana matatu nemazana matatu - pamwe ne15%. Mukati memakore mashanu, India yakawedzera zvakapetwa kaviri nhamba yemarobhoti emaindasitiri anoshanda mumafekitori emunyika.
Mugove wemarobhoti achangobva kuisirwa muAsia yaive zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvekuwanikwa kwepasirese. Kutengesa kweanosvika zana nemakumi mairi nemazana mashanu emarobhoti muChina kuri pazasi pemarekodhi emakore a2018 na2017 asi zvakadaro zvakapetwa zvakapetwa kaviri nhamba dzakatengeswa makore mashanu apfuura (2014: 57,000 mayuniti). Kuiswa kwemisika yepamusoro yeAsia kwakadzikira - kuChina (kubvisa 9%) uye Japan (kubvisa 10%).
MuChina, huwandu hwakawanda hwe71% yemarobhoti matsva akatumirwa kubva kune vekunze vanotengesa. MaChinese vagadziri vachiri kunyanya kupa kune epamba musika, uko kwavanowana kuwedzera musika migawo. Vatengesi vekunze vanounza makumi maviri neshanu muzana ezviuniti zvavo kumaindasitiri emotokari, nepo ichingori 12% yevatengesi veChinese. Naizvozvo, vatengesi vekunze vanonyanya kukanganiswa nekuderera kwebhizimusi muChina mota indasitiri kupfuura ivo vekunze vanotengesa.
Europe yakasvika padanda rekushandisa remakumi mashanu nemakumi mashanu emayuniti mu2019 - pamwe ne7%. Germany inoramba iri mushandisi mukuru ine anoshanda anoverengeka mayuniti anosvika 221 500 - iyi ingangoita katatu stock yeItari (74,400 mayuniti), kakapetwa kashanu stock yeFrance (42,000 mayuniti) uye kanokwana kagumi stock yeUK (21,700 units ).
Zvekutengesa marobhoti zvinoratidza mufananidzo wakasiyana pamisika mikuru mukati meEuropean Union: Anosvika makumi maviri nemazana mashanu marobhoti akaiswa kuGerman. Izvi zviri pazasi pegore rekodhi 2018 (kubvisa 23%) asi padanho rakaenzana sa2014-2016. Kutengesa muFrance (+ 15%), Italy (+ 13%) neNetherlands (+ 8%) zvakakwira. Robhoti muUnited Kingdom inoramba iri padanho repasi - matsva matsva akaderedzwa ne16%. Iwo achangobva kuiswa mauniti zviuru zviviri muUK akapetwa kagumi zvakapetwa pane zvakatumirwa kuGerman (zvikamu makumi maviri nemazana mashanu), zvakapetwa kashanu pasi peiyo muItari (11,100 mayuniti) uye kanenge katatu zvakapetwa pane kuFrance (6,700 zvikamu).
IU.SA ndiyo inonyanya kushandisa mabhizimusi emashandisi muAmerica, inosvika kune imwe itsva yekushanda zvinyorwa zvemazana anenge mazana maviri nemakumi matatu nemazana makumi maviri nemakumi maviri emazana - kusvika 7% Mexico inouya yechipiri nezvikamu makumi mana nemazana matatu, inova chikamu che11% ichiteverwa neCanada ine zvikamu zvinosvika 28,600 - pamwe ne2%.
Kuiswa kutsva muUnited States kwakadzikira ne17% mu2019 zvichienzaniswa neyakarekodwa gore ra2018. Kunyangwe, iine zvikamu makumi matatu nematatu zvakatumirwa, kutengesa kunoramba kuri padanho repamusoro kumiririra mhedzisiro yechipiri yakasimba nguva dzese. Mazhinji emarobhoti muUSA anotengwa kubva kuJapan neEurope. Kunyangwe, paine pasina akawanda maNorth America vagadziri vemarobhoti, kune akawanda akakosha marobhoti system masanganiswa. Mexico inotora yechipiri muNorth America ine dzinosvika zviuru mazana mana nemazana matanhatu - kudzikira kwe20%. Kutengesa muCanada kuri 1% kusvika kuchinyorwa chitsva cheanosvika zviuru mazana matatu nemazana matanhatu anotumirwa.
South America nhamba yekutanga yekushanda iri muBrazil ine dzinosvika 15,300 mayuniti - pamwe ne8%. Kutengesa kwakadzikira pasi ne17% pamwe neanosvika chiuru nemazana masere ekuisirwa - ichiri imwe yemhedzisiro yepamusoro - yakangorohwa nekutumirwa zvinyorwa mu2018.
Maitiro epasirese mukubatana kwevanhu-robhoti
Kugamuchirwa kwekubatana kwevanhu-robhoti kuri kuwedzera. Takaona kuiswa kwecobot kwakakura ne11%. Uku kushambadzira kwekutengesa kwekushambadzira kwaive kwakapesana neyakajairika maitiro neyakajairika maindasitiri marobhoti muna 2019. Sezvo vazhinji uye vazhinji vatengesi vanopa vanobatana marobhoti uye huwandu hwezvishandiso hunowedzera hukuru, chikamu chemusika chakasvika 4.8% yehuwandu hwe373,000 emabhoti marobhoti akaiswa mu2019. Kunyangwe uyu musika uri kukura nekukurumidza, uchiri mudiki.